Netflix တွင်အကောင်းဆုံး Netflix နှင့်ချမ်း Ch သောရုပ်ရှင် ၅၀ - စက္ကန့်ခြောက်ဆယ်အတွင်းကုန်သွားသည် - Netflix ရုပ်ရှင်
Netflix ရှိအကောင်းဆုံး Netflix နှင့် Chill Movies ၅၀ - ခြောက်ဆယ်စက္ကန့်အတွင်းတွင်ကုန်သွားသည်
Fargo ရာသီ2သည် Netflix တွင်ရှိပါသလား။ House of Cards ရာသီ (၄) တွင်ပြသထားသောရက်စွဲနှင့်နောက်တွဲယာဉ် (ဗီဒီယို)
သင် Netflix တွင်ချက်ချင်းထုတ်လွှင့်နိုင်သည့်အကောင်းဆုံး Netflix နှင့် Chill ရုပ်ရှင်များ၏လက်ရှိစာရင်းအပြင်ဖြည့်စွက်ခြင်းအသစ်လည်းပါ ၀ င်သည် ခြောက်ဆယ်စက္ကန့်အတွင်းသွားပြီ ။
Nicolas Cage နှင့် Angelina Jolie တို့သည်အော်စကာဆုရနှစ် ဦး စလုံးဖြစ်သည်။ ခြောက်ဆယ်စက္ကန့်အတွင်းသွားပြီ Netflix ပေါ်ရှိအကောင်းဆုံး Netflix နှင့် Chill ရုပ်ရှင် ၅၀ ၏ယခုအပတ် update ကိုနောက်ဆုံးဖြည့်စွက်သည့်အရာ။
အခုတော့ဒါကသူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ချက်တွေကအရည်အသွေးကောင်းတဲ့ဖျော်ဖြေမှုတွေမဟုတ်ပါဘူး၊ ဆိုလိုတာကခင်ဗျားဟာအလေးအနက်ဖျော်ဖြေမှုတွေမရဘူးဆိုတာပါပဲ။ အငြိမ်းစားကားသူခိုးအကြောင်းရုပ်ရှင်မှာကားတစ်စီးမှာကားတစ်စီး ၅၀ ခိုးယူဖို့အတွက်တစ်ညထဲမှာဘာဖြစ်လို့မျှော်လင့်သင့်တာလဲ။ သူ့ညီလေးရဲ့ဘဝလား။
Giovanni Ribisi မှကစားသောညီဖြစ်သူ Kip Raines ၏နာမည်ဆိုး Long Beach ကားသူခိုး၏ဘ ၀ မှဝေးကွာသောလမ်းပေါ်မှလမ်းလျှောက်သွားသော်မူဂျိုးဗန်ရီဘီဇီမှကစားသောသူ၏ညီငယ် Kip Raines သည်သူမနှင့်အတူရေပူစီးလာပြီးကားစီးသူရဲ Raymond Calitri နှင့်အတူပါလာသည်။ မိမိအတင်းပါးကိုကယ်တင်ရန်။ ရဲများကသူတို့၏နောက်ကွယ်တွင်ရဲများကအစောင့်အရှောက်ထားစဉ် Angelina Jolie၊ Robert Duvall, Chi McBride, Will Patton, Scott Caan, James Duval တို့ပါဝင်သည်။
Raines နှင့်သူ၏အမှုထမ်းများကိုလည်ပင်းကျနေသောအဓိကရဲတပ်ဖွဲ့ကို Delroy Lindo နှင့် Timothy Olyphant တို့ကကစားသည်။
ရုပ်ရှင်ထဲတွင်အလွန်ကောင်းသောလုပ်ဆောင်မှုအစီအစဉ်များနှင့်ချိုသာသောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုပါရှိသည် (ဆိုလိုသည်မှာ၊ နစ်ကိုးလပ်စ်ကေ့ဂ်သည်ဤရုပ်ရှင်၌ပါ ၀ င်သည်!) သို့သော်ရှည်လျားသော၊ အအေးနှင့်မီးခိုးရောင်ဆောင်းရာသီတွင်နှင်းများကိုအပြင်သို့မထွက်လိုပါကစောင့်ကြည့်ရန်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။ သင်သည်သင်၏ bae ကျော်ဖိတ်ခေါ်နှင့် snuggle ချင်တယ်ဆိုရင်။
နောက်တစ်ခု:Netflix တွင်အကောင်းဆုံး Netflix နှင့် Chill Movies ၅၀
ဘယ်မှာထွက်စစ်ဆေးပါ ခြောက်ဆယ်စက္ကန့်အတွင်းသွားပြီ ၏ဤရက်သတ္တပတ်ရဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ထဲမှာအဆင့် အကောင်းဆုံး Netflix နှင့် Chill ရုပ်ရှင် ၅၀ နှင့်ဤအရေးယူဆောင်ရွက်မှု - ထုပ်ပိုးရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုရန်အစီအစဉ်များကိုကားချစ်သူများအားလုံးယနေ့ညတန်ဖိုးထားပါလိမ့်မယ်!
လွင်ပြင်မျက်မှောက်နောက်တွဲယာဉ် netflix တွင်ပုန်းအောင်း
ခဝါသည်အိမ်သူအိမ်သားရာသီ3စက္ကန့်ဝက်
ဟာဝိုင်ယီ 5-0 netflix